ရုရှားတပ်ဖွဲ့များ နောက်ဆုံးပေါ် S-500 ဒုံးကျည်စနစ် စတင်ရရှိ - Xinhua News Agency
ရုရှားသံတမန်များအား နှင်ထုတ်ပြီးမှ နေတိုးက ဆွေးနွေးဖို့ စကားပြောလာခြင်းသည် "အဓိပ္ပါယ်မဲ့"ကြောင်း ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောကြား
မော်စကို ၊ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားတပ်ဖွဲ့များသည် ခေတ်မီ နောက်ဆုံးပေါ် S-500 Prometheus လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်အား စတင်လက်ခံရရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ရုရုားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Yury Borisov က စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ပြုလုပ်သော ဖိုရမ်တစ်ခု၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ရုရုားနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်က “မကြာသေးခင် အချိန်အထိ ရုရှားနိုင်ငံက အစိတ်အပိုင်းများစွာ ဆက်စပ်ပါဝင်တဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပထမအသုတ်ကို စတင်ပို့လိုက်ပါပြီ”ဟု ဆိုသည်။ သို့သော်လည်း ပထမဆုံး ပေးပို့မှုသည် မှာယူထားသူများ တောင်းဆိုသည့် အကွာအဝေးအပြည့်အဝ မဟုတ်သေးကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းမှာ သဘောတူထားသည့် အသွင်အပြင်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံအတိုင်း အစိတ်အပိုင်းများစွာ ဆက်စပ်ပါဝင်သော ပုံသဏ္ဍန်များကို ရည်ရွယ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။S-500 စနစ်သည် တာဝေး နှင့် တာလတ်ပစ် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည်များသာမက စစ်လေယာဉ်များကိုပါ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်တားဆီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
အဆိုပါ S-500 စနစ်သည် လက်ရှိ S-400 Triumph စနစ်အား အဆင့်မြှင့်ထားသည့်ပုံစံ ဖြစ်ပြီး S-400 Triumph စနစ်သည် အကွာအဝေး ၄၀၀ ကီလိုမီတာ နှင့် အမြင့် ၃၀ ကီလိုမီတာအထိ ပစ်မှတ်များအား ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Russian troops begin to receive newest S-500 missile system
MOSCOW, Sept. 16 (Xinhua) — Russian troops have begun to receive the latest S-500 Prometheus air defense system, Russia’s Deputy Prime Minister Yury Borisov said ataforum on Thursday.
“Until very recently Russia has completed the state tests of the complex and starts to deliver its first batch,” said Borisov, although noting that the first delivery is not in the full range requested by the client.
“This refers to such configurations of the complex as the agreed composition involves,” he said.
According to the report, the S-500 system is designed to intercept long- and medium-range ballistic missiles as well as warplanes.
The system is an upgraded version of the current S-400 Triumph system, which is capable of destroying targets atadistance of up to 400 km andaheight of up to 30 km. Enditem
Photo – Russian S-400 Triumf surface-to-air missile system is seen on the Red Square for the Victory Day parade in Moscow, Russia, May 9, 2019. (Xinhua/Bai Xueqi)